आँखाको थमनी रोग retinas: कारणहरू, लक्षण र उपचार तरिका
रेटिना को थमनी रोग आँखा - एक साधारण समस्या, रक्त नली मा परिवर्तन र सामान्य रगत प्रवाह को अवरोध सँगसँगै छ जो। यस्तो विकृति आघात, केही रोगहरु को फलस्वरूप, विभिन्न कारण, जस्तै लागि उत्पन्न हुन्छ। तर यो रक्त संग दीर्घकालीन समस्या कम दृष्टि र अन्य जटिलताहरु संग fraught छ जो Tissues, मा trophic परिवर्तन गर्न जान्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ।
यो खतरनाक को थमनी रोग retinas आँखा?
वास्तवमा, यस्तो अवस्थामा अति खतरनाक छ। वास्तवमा, पहिले नै उल्लेख रूपमा, लामो गरिब परिसंचरण कुपोषण रेटिना ऊतक गर्न जान्छ। बारी मा, यस मामला मा परिणाम ढिलो, तर प्रगतिशील degenerative प्रक्रियाहरू छन्।
नियम को रूप मा, जहाजहरू थमनी रोग रेटिना को पनि सजिलै देखिने छैन लक्षण सँगसँगै। जबकि अन्य विरामीहरु घट्यो दर्शनको गुनासो केही विरामीहरु, समस्या को अस्तित्व संदिग्ध छैन र थिएन। Degeneration को eyeball मा स्पट वा "झिंगा" आँखा अघि, साथै बेचैनी र कहिलेकाहीं दुखाइ देखा पर्न सक्छन्। भास्कुलर घाउ को macula मा उत्पन्न भने, केन्द्रिय दृष्टि ग्रस्त पहिलो। अनुपचारित सम्भव तिरस्कार र क्रमिक necrosis दृष्टि पूर्ण हानि सँगसँगै छ जो रेटिना, को।
थमनी रोग आँखा retinas र यसको भिन्न
वास्तवमा, यस्तो उल्लंघन को कारण, नियम, रोग को प्रगति मा झूठ। यो आधारमा, रोग धेरै आधारभूत प्रकारका हुन सक्छ:
थमनी रोग अक्सर चोट पेट, thorax र खोपडी, रेटिना मा आक्रान्त सँगसँगै गर्दा हुन्छ।
मुख्य कारण मधुमेह गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। यो endocrine रोग चयापचय विकार र व्यावहारिक हार सबै निकायको जहाजहरु गर्न प्रमुख पछि। जब यस्तो रोग, को भास्कुलर पर्खाल परिवर्तन, साथै यसको लुमेन को साँघुरो र केशिका permeability उल्लङ्घनको। र रेटिना को सानो नली गर्न क्षति मधुमेह को सबै भन्दा साधारण जटिलताहरुलाई एक मानिन्छ।
यो एकदम साधारण र तथाकथित छ को hypertensive थमनी रोग रेटिना। किनभने उच्च रक्तचाप एक पोत पर्खाल परिवर्तन परिणामस्वरूप, रक्तचाप मा वृद्धि सँगसँगै छ - यो थप बाक्लो र कम पारगम्य बन्नेछ। अक्सर वृद्धि दबाव फाइब्रोसिस arterioles र capillaries आँखा गर्न जान्छ।
वास्तवमा, यो रोग को कारण धेरै विकास हो। Degenerative प्रक्रियाहरू hypotension, atherosclerosis, र अन्य विकारहरु को परिणाम हुन सक्छ। तैपनि, उपचार र चिकित्सा विशेषज्ञ हेरविचार आवश्यक छ।
रेटिना आँखा उपचार को थमनी रोग
मुख्यतया डाक्टर भास्कुलर क्षति को कारण निर्धारित पर्छ - र यो विकल्प प्रभावकारी उपचार निर्भर देखि यो छ। यसलाई प्राथमिक रोग प्रक्रिया हटाउन थप परिवर्तनहरू रेटिना ऊतक रोक्छ प्रमाणित गर्नुभयो। उदाहरणका लागि, मधुमेह अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सही आहार र एक डाक्टर, एक एन्डोक्राइनोलजस्ट द्वारा निर्धारित उपचार को नियम को उत्सव हो।
यसबाहेक, निर्धारित जो रक्त प्रचार लागूपदार्थ विरामीहरु, पोत पर्खाल र सामान्यकरणगरिएकोतस्वीर आफ्नो permeability अझ। उपयोगी यस्तो एस्कोर्बिकएसिड रूपमा केही भिटामिन लिइरहेको छ।
BAUSCH + LOMB - प्रत्येक लागि संपर्क लेंस
Uluchshit दृष्टि रूपमा? सुझाव
त्यहाँ अनुकूलता कुंभ पुरुष र महिला धनु हो?
13 राशिफल। केही वर्ण बीच Ophiuchus? Horoscope - Ophiuchus
जापानको सर्वोच्च अदालतले विवाहित महिला विवाहको अघि हुने थर राख्न अनुमति छैन
त्यो रंग मूर्तिहरु दिन प्राचीन ग्रीक मूर्तिकारहरूले प्रयोग
एक धनुष कसरी बनाउने र आफ्नो हातले तीर गर्न
औषधि "Siofor": समीक्षाको लागि आवेदन मा निर्देशन
Shotirovanie eyebrows: प्रक्रिया को वर्णन, टिप्पणीहरू